LALANA « ROUTE DES OEUFS » : Hanao fifanarahana amin’ireo tompon’ny trano sy tany fanjakana
Efa manomboka ny fanamboarana ny lalana « Route des œufs » eny Mahitsy. 6 septembre 2019
Ny Minisiteran’ ny Fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy no tompon’antoka amin’ny fanamboarana ity asa ity. Ho fanohizana ny asa dia noraisina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra farany teo ny didim-panjakana manambara fa ilain’ny besinimaro ny asa fanamboarana ity lalana ity. Mety hisy ny fakan’ny fanjakana ireo ampahana tany na trano voakasiky ny asa, na amin’ny alalan’ny fifanarahana na koa amin’ny alalan’ny fanesorana noho ny filàn’ny besinimaro (expropriation pour cause d’utilité publique).
Tsiahivina fa ity lalana ity dia mampitohy ny kaominina ambanivohitra Mahitsy sy Mahazaza ao amin’ny Distrikan’Ambohidratrimo ary mirefy 19, 25 kilometatra eo ho eo. Ny kaominina Ambohidratrimo no isan’ireo kaominina mpamokatra atody betsaka indrindra eto an-drenivohitra. Ny 90 isan-jaton’ny atody ilaina eto Antananarivo dia saika avy eny amin’ity Kaominina ity avokoa ary mbola mandefa any amin’ny faritra ivelan’Antananarivo ihany koa aza ireo mpiompy akoho eny an-toerana.
Voalaza nefa fa potika sy vaky avokoa ny 15 isan-jaton’ireo atody vokarin’ny tantsaha ireo noho ny haratsin’ny lalàna, ka izany indrindra no nanapahan’ny fanjakana hevitra hamita haingana ity lalana ity. Orinasa sinoa no nahazo ny tsenan’asa ary vola manodidina ny 30 tapitrisa dolara avy amin’ny fanjakana sinoa miampy ny fanampiana avy amin’ny fanjakana malagasy no hanatanterahana azy.